Baaxadda: Falanqaynta Mobilada ee Go'aan qaadayaasha | Martech Zone
Ilodanimada waa codsi fudud oo moobiil ah Analytics madal loogu talagalay horumariyeyaasha inay dhexgalaan. Barxadda waxaa ku jira falanqaynta waqtiga dhabta ah, muraayadaha is-dhexgalka, haynta koox-kooxeed, funaanno degdeg ah oo dib-u-falcelin ah, taariikh shaqsiyeed shaqsi iyo dhoofinta xogta
Xirfadlayaal, ganacsi iyo qorshayaal shirkadeed sidoo kale waxaa ka mid ah falanqaynta dakhliga, qeybinta isticmaaleyaasha, weydiimaha la beddeli karo, u gaar ahaanshaha xayeysiinta Analytics, marin u helida xogta tooska ah iyo isdhexgalka caadada ah iyadoo kuxiran baakada aad iska qortay.
Ku biirista Amplitude waxay u baahan tahay kaliya hal xariiq oo koodh ah oo ku jira barnaamijkaaga. Marka la isku daro, waxaad la socon doontaa maalin kasta, toddobaadle, iyo bil kasta isticmaaleyaasha firfircoon, kalfadhiyada, haynta, noocyada qalabka, madal, waddanka, luqadda, nooca barnaamijka, goobta, iyo inbadan oo ka baxsan sanduuqa. Kudar koodh koodh ah si aad ula socoto dhacdooyin dheeri ah inta lagu guda jiro kalfadhiga.
Warbixinta Ku Haynta Baaxadda
Tags: Ilodanimadawarbixinta funnelfalanqaynta moobiilkafalanqaynta barnaamijka moobiilkahaynta barnaamijka mobiladafalanqaynta dalabka moobiilkahaynta arjiga moobiilkahaynta warbixinta